isayensi ephathelene Nezomthetho kanye Namandla uhlobo umsebenzi okhokhelwayo kuhlehlela emuva ezikhathini bamaRoma. Kwakuwusuku amaRoma wabeka izinsika eyisisekelo zonke practice zomthetho yesimanje. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi phakathi namakhulu eminyaka kwakukhona isethi njalo imibono mayelana Uchwepheshe ekahle. Emlandweni isimo Russian njengoba kukhona abantu abaningana abenze elikhulu kakhulu ekwakhekeni isimiso somthetho kazwelonke.
abalobi zomthetho Akwaziwa
Noma yimuphi umthetho esikhishwe ngesisekelo ekuhloleni komthetho, indima ebalulekile lomthetho play theorists, systematizing ngokusebenzisa izindlela zesayensi kanye ubuqiniso ekuthuthukiseni isiyalo zemfundo ukuqeqesha izisebenzi ezintsha. Kakhulu ezidumile abameli Russian kulo mkhakha womsebenzi: N. M. Korkunov, K. P. Pobedonostsev, B. N. Chicherin, MI Braginsky.
UNikolai Mikhailovich Korkunoff
N. M. Korkunov (1853-1904) - livela umndeni zezemfundo, owaphothula Petersburg University, futhi ngemva - thishela. Nge-70 eminyakeni engu-90 leminyaka, ozongitshela ngomthetho womthethosisekelo at uMthetho Faculty at Alexander Lyceum kanye Military Academy. Phakathi imisebenzi yakhe - 'Isinqumo futhi umthetho "," umthetho wombuso Russian. " Cishe esikhathini esingangonyaka UNikolai Mikhailovich isikhundla of uNobhala State uMkhandlu Wombuso.
Umsebenzi obaluleke kakhulu - "Izinkulumo theory jikelele umthetho" - wayengomunye walaba izincwadi main emayunivesithi isiRashiya, uye nazo zahunyushelwa olimini French nesiNgisi, abameli Western kubhekwe "Izinkulumo" Ucwaningo olunzulu ngaphakathi kohlaka omuhle umthetho theory.
Kusukela izinkolelo NM Korkunova awahlangabezananga imibono ka nenkathi yamaSoviet, imisebenzi yakhe iye wafunda kuphela njengoba okuhlangenwe nakho lezazi ovulekile wesikhathi esidlule, futhi yesayensi yanamuhla, ukubhekisela enesisindo ukubaluleka lokusungula - a rarity, kodwa akufanele sikhohlwe ukuthi isithelo imisebenzi Korkunova, alo efundisa umsebenzi abangu izakhi lokuqala amagatsha ezinjalo isayensi njengephuzu zokuphatha, international, umthetho wombuso.
KP Pobedonostsev sikhulisa umkhaya owesaba uNkulunkulu professorial. jurists Russian wesikhathi ukubukwa ngezinye izikhathi yenza okuhluke kakhulu arhaisticheskie - umthetho, ngokombono wabo, kufanele esekelwe nezimfundiso Orthodox kanye nezimiso zokuziphatha. Lo mbono washaya futhi Pobedonostsev, ucabangela, isibonelo, ukuthi ukhetho akuzona ezuzisa umphakathi, odala ezishibhile imidlalo zezombusazwe. Abantu, ngokuvumelana usosayensi, akufanele ukwazi ukuveza intando, kusukela inhloso waphezulu ukuthi ubuholi bonke ezweni elinikeziwe nenkosi.
Ezincwadini Soviet K. P. Pobedonostsev yethulwa buzeli of ukusabela okweqisayo, kodwa akazange siqambe ukulandisa kwakhe, kusukela umsebenzi lo usosayensi kubhekwa Classic: okukhulu ngokwazi umlando umthetho, Pobedonostsev ngobuciko olwenziwa ekuhlaziyweni izikhungo ezithile ezingokomthetho ngokusebenzisa indlela ngokomlando yokuqhathanisa.
Ngaphezu kwalokho, ukubaluleka okukhulu kwaba inkambo yakhe komthetho we-civil lusekelwe olwazini eyisisekelo esikoleni zomthetho Russian.
Akuwona wonke abameli eyaziwa Russian kwekhulu elidlule kungaba ozibongayo onjalo ocabangayo njengoba B. N. Chicherin, futhi owayengumphathi umsekeli neo-Hegelianism, nesazi-mlando, futhi yemvelo isayensi onguchwepheshe. Ukushayela yokufundisa, usosayensi wakuqonda kwenkathi we Izinguquko Omkhulu we emlandweni wabantu Russian. Njengoba uthisha, Chicherin BN kuzama indlela entsha ngokuphelele yokufundisa esekelwe cwaningo yokuphathwa komphakathi theory. Nokho, ukubukwa kuhluke isazi olandelanayo - nommeleli elite isikhathi kweqiniso, naye wayekholelwa ukuthi umphakathi Russian ngeke kube khona kungekho i autocrat. B. N. chicherina kungenziwa kubhekwa umsunguli esikoleni umthetho historiography, njengoba ebhalwe usosayensi imisebenzi efana "The History of Imibono Political", "Impahla kanye State", eyakho "Ukuhlolwa umlando umthetho waseRussia."
Futhi, abameli abambalwa owaziwa, ngokungafani chicherina B. N., asohlwini sokunconywa umnikelo nemfundiso kaZiqu liberalism, amagama zezinkolelo zalo eziyinhloko.
Gabriel Feliksovich Shershenevich
Shershenevich GF - livela umndeni yizicukuthwane Polish, owaphothula University of Kazan. Sphere isithakazelo ososayensi ekuqaleni imisebenzi zokufundisa babe izikhungo ezinjalo komthetho we-civil, njengoba izibambiso nezinhlangano ezingokomthetho. Shershenevich GF ukuthi uyabandakanyeka komthetho kwezohwebo, kulo efakwe ucwaningo ocwaningeni.
I wokulandisa lokuqala theorists brilliant besishumayela Yiqiniso jikelele umthetho yombango, okuyinto engafani Ukulifunda ngijule izenzo zomthetho zokwahlulela aqukethe ngokuvamile eziningi zamagama. Kamuva Shershenevich GF zama dogmatize umlando ifilosofi umthetho, ukuhlela isithombe ulwazi disparate.
Abacwaningi waqale wanika abafundi incwadi ehlelekile phezu komthetho we-civil, wabiza nokuqoshwa komthetho kanye nokususwa kwenza zomthetho.
Ukusenza umkhuba abameli inkulumo lesidze zokwahlulela
YeKambiso Emncintiswaneni party - lena Duel of Wits, okudinga ithalente, bokukhuluma, ikhono lokwenza izinqumo angesabi. Prakthiza yena, wanika sicabangisise theorists. Phakathi edume kunazo - F. Plevako, A. F. Koni, vd Spasovich nabanye. inkulumo-Forensic abameli eyaziwa okusaphenywa bafundelwa amandla umthetho wezwe futhi bayizibonelo yezenzo zokulungisa.
abameli Akuwona wonke owaziwa kwahluka ngakho ezingavamile ithalente oratorical njengoba Koni F. A., indodana ka-edumile vaudeville umbhali, umhlaziyi, umhleli nomlingisikazi. Ijaji esizayo futhi umshushisi wafundiswa ekhaya, eziqephuzayo ngezilimi ezinhlanu. Koni F. A. wahileleka kakhulu inqubo zomthetho, bekatsatsa izikhundla eziphezulu ehhovisi lomshushisi, emajaji, ngokukhethekile, kwaba usihlalo enkantolo yesifunda Peterburg.
Ezimweni eziningi ephezulu iphrofayela Kwahlolisiswa iqhaza isikhulumi. Omunye futhi elalidume kunawo wonke - ubulungiswa Vera Zasulich, imeya Petersburg wazama nokudubula ngenxa ukuziphindiselela Arkhip Bogolyubov, owaba yisisulu nangobudlova bureaucratic. Lamangala eziningi, Koni A. F. uye wakwazi ukufeza i ukukhululwa ngoba Zasulich, kamuva owaba owaziwa kaMarx-wamavukelambuso.
Koni A. F. ngenkuthalo waqhubeka esebenza e zeminyaka amandla Soviet, kokuba inguqula-mbuso, isazi somthetho esidumile, waba uprofesa e Petersburg University, ukufunda okuningi izinkulumo zeningi, ukufundisa kwabo. Wayephila ukuguga, a eyiqaphuqaphu brilliant kube ngomzuzu wokugcina akazange adele ukulinga basebenzele wobaba.
Ngamunye izibalo ezishiwo ngenhla, yebo, isibonelo wokwethembeka enkonzweni kunjalo ezikhethiwe, theorists yesimanje kanye nodokotela kudingeka silandele isibonelo sabo.